Britain iyo sida looga arko duqeynta Qaza - BBC Somali
Britain iyo sida looga arko duqeynta Qaza
Image caption Sayeeda Warsi ayaa iska casishay wasaarad ay ka haysan Briten.
Wasiiru dowlaha xafiiska arrimaha dibadda ee dalka Briten oo lagu magacaabo Sayeeda Warsi, ayaa iska casishay jagadii ay ka heysay xukuumada Briten, iyadoo casilaadeedana sabab uga dhigtay umuuraha ka taagan Qaza.
Xaaladda Qaza ayeey ku tilmaantay dhibaatada halkaa ka taagan oo aanan la difaaci karin marka laga eego xaga bani'aadanimada.
Warqadda is casilaadeeda ayeey ku sheegtay Sayeeda Warsi in ay aaminsantahay in siyaadda hadda ee xukuumada Briten ay dhaawacday sumcadii caalamka ay Briten ku leheyd.
Waxa ay aheyd haweeyneydani gabadhii ugu horeeysay oo Muslim ah oo Wasiir ka noqota xukuumada Briten.
Weriyaha BBC-da ee arrimaha siyaasada ayaa sheegaya in Rai'sul wasaare, David Cameron, ay ku dhaliileen mucaaradka iyo mudanayaal ka tirsan xisbigiisaba in uusan si adag u canbaareeynin duqeynta ay Israa'il ka geysaneyso jiida Qaza.